Maamulka Balanbal Oo Codsaday In La Joojiyo Dagaal Beeleedka Halkaa Ka Taagan – Goobjoog News
Tuulada Jilible oo u dhaxeysa degaannada Balanbal iyo Xeraale ee gobolka Galgaduud ayaa saacadihii la soo dhaafay waxaa ku dagaallamay dadka reer miyiga ah ee deggan degaannadaasi.
Malleeshiyo beeleedka ku dagaallamay inta u dhaxeysa Balanbal iyo Xeraale ayaa la soo sheegayaa inuu gaaray khasaaraha ugu badan, waxaana ku dhintay shan ruux halka ay ku dhaawacmeen dad kor u dhaafaya toban ruux.
Maamulka degmada Balanbal ayaa u sheegay Goobjoog News in maanta xaaladdu tahay mid deggan islamarkaana ay codsanayaan in la kala qaado malleeshiyaadka.
Cabdirisaaq Axmed Xalane oo ah guddoomiye xigeenka maamulka degmada Balanbal ayaa sheegay in hadda lagu guuleystay in la kala qaado malleeshiyaadka.
“Malleeshiyaadka waa la kala qaaday balse waxba iskuma jiraan oo waxa weeye dagaal waa laga baqdin qabaa marka waa in si fiican nimankaa loo kala durjiyaa si dagaal looga fogaado” ayuu yiri Cabdirisaaq Axmed.
Xiisaddani oo ka dhalatay dhul daaqsiin ku yaalla inta u dhaxeysa Balanbal iyo Xeraale ayaa ka dambeysay kadib roobabka deyrta oo ay heleen degaanno ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka.
Wvnlfh aczast cialis price printable cialis coupon
Bbkdkq nezyvt genaric viagra cialis generic name
Rpinal xdntaf discount cialis best place to buy cialis online reviews
Bukwgm ivolmn Buy cheap viagra online canada online pharmacy
cialis online australia shop cialis cialis canada and paypal...
cheap viagra mastercard viagra super overnight amazon viagra...
cialis kaufen mit paypal zahlen cialis forum cheap name bran...
viagra for sale no prescipstion viagra and pregancy cheap vi...
doctor viagra asking viagra strengths viagra canada free sam...